Igu qiimeeya waxa aan ahay! | Laashin iyo Hal-abuur
Sucdi waxay aheyd Gabar aad u Qurux badan, oo jalaqsan, jir iyo joog ahaanba, balse, aan dadka dhexdiisa magac qurxoon ku lahayn. — Waa Sheeko ku saabsan Isbadalka ku dhacay Bulshada, gaar ahaan Gabdhaha Soomaaliyeed oo uu diyaariyay Cabdicasiis Maxamed Shidane.
Sucdi iyadoo yar ayey guursatay, wiilkii ugu horreeyay ee ey is calmadeen, kama eysan labalabeyn in ey ka run sheegto dareenkeeda jacayl, guurkaasi waxuu ku soo gabagabaysmay guul-darro iyo gunuunac, waxayna ka qaadday niyadjab iyo in eysan aaminin nin dambe.
Waxay door biddey in ey nolasheeda ku salayso wax kasta iyo waxii ey nafsaddeedu u hilawdo. Waxay billawday in ey isticmaasho maan-dooriyaasha, si ey u hesho xasillooni iyo nasasho ey ka waysay bulshada qofkii ey ka doortay.
Garashdadeedu waxay tustay in ey la haasaawdo dhallinyaro kala duwan, waxayna billawday caweys iyo dhafar aan kala joogsi lahayn, taasoo ey ka raadinayso wehel iyo la wadaagidda dareekeeda nolaleed, kadib markii qoyskeedu ey dayriyeen, kana saareen liiska qayska iyo awlaadda.
Sucdi waxay billawday in ey jabiso xeerka iyo caadada u taallay bulshada markaas ey ku dhex nooleed, oo ah bulsho xirxiran dhaqan ahaan, balse, u furfuran wax kastoo xun oo wax yeelleynaya xurriyadda shaqsiga, kadib markii ey baratay rag fara badan oo ugaarsaday iyaduna eey ugaarsatay.
Waxay billawday in ey u labisato si layaab leh, indhahana soo jiidanaysa ragguna ka helaan qalbigaba yeysan ka jeclaysanine. Waxay billawday in ey soo muujiso bannaankana soo dhigto labadeeda gacmood, timaha iyo qoorta, taas oo horay ugu daboolnaan jiraty, balse, ey u aragaty in eysan waxba badalayn dabooliddooda iyo feydiddooda, iyada oo badashay qaab socodkii iyo habkii ey u laafyoon jirtay, kuna kabaysa Qosol macaan iyo cod dabacsan.
Waxaa u kiraysan guri yar oo aad loo qalabeeyay, kuna yaalla meelaha aadka u daggan magaalada, raggu aad ayey ugu soo qulqulayaan gurigaas, iyagoo leh nuuc kasta, ganacsade, siyaasi, wadaad, dhallinyaro, waayeello intaba. Waxay noqotay qof markii ey magaalada marayso aad loo qiimeeyo, maxaa yeelay, xiriirka sirta ah ee kala dhaxeeya ragga isku muujiya in ey yihiin magafayaal ayaa waxuu siinayaa qaddarin iyo qiimayn gaara, marka laga reebo lacagta faraha badan ee ey ka tabacday ka ganacsiga jirkeeda. Waxaa u sii dheereed isticmaalka maan-dooriyaasha, taas oo ey u keeni jireen rag bulshada ka dhex muuqda